Marketing Real Estate Online dia nivoatra | Martech Zone
Marketing Real Estate Online dia nivoatra
Alatsinainy, Jolay 6, 2009 Talata, Martsa 1, 2016 Douglas Karr
Ny indostrian'ny Real Estate dia niatrika fiovana lehibe noho ny trano fonenana (voalaza mialoha eto), ny fiovan'ny teknolojia ary ny fanjakan'ny fikarohana bebe kokoa amin'ny Internet. Ny bubble ary koa ny fiakarana sy ny fidinan'ny tsenan'ny fampindramambola dia nanery ny mpiasan'ny trano hitandrina kokoa amin'ny fampiasam-bola amin'ny marketing.
Niova ihany koa ny teknolojia. Fampidirana finday ary ny teknolojia an-tserasera dia manolotra rafitra izay manolotra rindranasa henjana ho an'ny mpiasan-trano, ao anatin'izany fitsangatsanganana trano sy tany virtoaly, fitsangatsanganana trano sy tany virtoaly finday ary fitsidihana trano sy trano audio. Ireo rafitra ireo dia tsy takatry ny Agent Real Estate taona vitsy lasa izay - ny agents dia tokony hampitambatra hery amin'ny fifaninanana hafa fa tsy ny fananana ilay application akory.
Na i Google aza dia niditra tao amin'ny Lalao Real Estate tamin'ny volana Mey lasa teo. Ireo agents sy ny fananany dia azo alefa any amin'ny Google Maps Real Estate. Tsindrio ny rohy Safidy fikarohana ao ankavanan'ny bokotra Search Maps ary hiseho ny lisitra mitete-midina. Select Varotra sy hofa fananana mifaka ary mahazo fampiharana matanjaka ianao:
Maherin'ny 56% amin'ny karoka amin'ny Internet amin'ny "trano sy tany" ary teny mifandraika amin'izany no atao ao amin'ny Google sy ireo tranonkala mpiara-miasa aminy, hoy i Google. Ny fanodinana angona ho an'i Google dia azo ampiasaina ho azy amin'ny alàlan'ny Google Base Data API.
Tags: google base data apiGoogle +fikarohana ao an-tranofivarotana findayvarotra sy hofa fananana mifakafitsangantsanganana virtoaly
Aza mandany be amin'ny famolavolana tranonkala
7 Jul 2009 amin'ny 7:38 PM
Zavatra iray ihany no nolazaiko – raha tsy izany famintinana mahafinaritra: SMS dia mifandraika amin'ny sehatry ny trano sy finday. Miakatra sy mananika ny fampiasana, ary raha atambatra amin'ny tranonkala finday, ny prospecta sy ny matihanina RE dia tena mahazo ny tsara indrindra amin'ny haitao maoderina marketing. Oh, ary sendra miasa amin'ny orinasa manao an'io aho. B)